Chiremba veItsvo Vokurudzira Vechidiki Kuita Zvidzidzo Zvepamwoyo Yavo
Mumwe chiremba achitarisa murwere mune chimwe chipatara
Nekuda kwekuwondomoka kwehupfumi kwaramba kuchiitika kwemakore akawanda munyika, vanhu vazhinji kunyanya vechidiki, vange vachibuda vachinotsvaga mikana kune dzimwe nyika.
Vamwewo vakawanda vanowana mikana yekunowedzera dzidzo kunze kwenyika havadzoke kumusha. Asi mumwe chiremba wechidiki uyo akanodzidzira kuve mazvikokota wekurapa itsvo kunyika yeAustralia ndemumwe wevashoma vanoona zvakakodzera kushandira munyika mavo.
Vebazi rezvehutano vanoti pari zvino munyika munaana mazvikokota vana chete vanorapa zvirwere zveitsvo. Mumwe wevana ava ndiMuzvare Dr. Rumbidzai Dahwa.
Dr. Dahwa vane makore makumi matatu nemasere ekuberekwa uye vakazvarwa muguta reKwekwe. Vakadzidza kuzvikoro zveprimary zvakasiyana-siyana munyika ndokuzoita secondary yavo paDomican Convent muguta reHarare .
Rwendo rwavo rwekuve mumwe waana maazvikokota vashoma vezvirwere zveitso munyika rwakatanga nekudzidzira kuve chiremba paUniversity of Zimbabwe.
Kupedza makore mashanu munhu uchiita zvidzidzo zvepamusoro inyaya inogona kuwomera vakawanda yakawoma zvekuti kuzowedzera mamwe makore pamusoro inyaya isingataurike nezvayo. Asi nekuda kwekuti kwavari kuve chiremba inyaya iri pamwoyo wavo Dr. Dahwa vakazvipira kuwedzera ruzivo rwavo kuti vave mazvikokota muzvirwere zveitsvo.
Zvichienderana nekuti munhu unenge waita izvi kupi kuti chiremba ave mazvikokota mune zvakasiyana-siyana kunotora makore mana kana matanhatu. Dr. Dahwa vakaita zvidzidzo zvavo kuAustralia uye vakapedza makore matanhatu vachidzidzira kuve mazvikokota wezvirwere zveitsvo.
Veruzhinji munyika vari kunetsekana nekuwana mari yekubhadharira vana vavo mari yedzidzo kunyanya yepamusoro. Kunyange vamwe vanenge vachida kuwedzera dzidzo yavo yepamusoro vanotadza kuita izvi nekuda kwechikonzero chimwe chete. Dr. Dahwa vanoti havana kunyanya kunetseka nekuti pavakawana mukana wekuenda kuAustralia vaikwanisa kushanda ukuwo vachiwedzera dzidzo yavo.
Dr. Dahwa pavakaenda kunze kwenyika muna 2007, nyika yaive pakati pematambudziko makukutu munyaya dzezvehupfumi zvekuti sezvo vaive munhu wechidiki vaigona kuenda zvachose vasingazodzoka zvegare kumusha. Dr. Dahwa vanoti kune vakawanda vaivapa pfungwa yekuti vasadzoka kunhamo yemuZimbabwe asi ivo vanoti vaive vagara vazvitsidzira mumoyo mavo kuti vaizodzoka kumusha kana vapedza zvidzidzo zvavo.
Asi Dr. Dahwa vanobvuma kuti pavakadzoka kumusha mugore ra2014 zvinhu hazvina kusvikovaitira mutserendende. Zvisineyi nechido chavo chekuda kushandira nyika yavo yechizvarwa, nekuda kwekuti hururmende yaive yamira kupa vanhu mabasa, Dr. Dahwa vakambotora mwedzi yakati kuti vasati vawana basa. Mushure mekuzowana basa vanoti vakasanganwo nezvimwe zvimhingamupinyi zvakati wandeyi.
Kunyange hazvino pasina humbowo hunoratidza huwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zveitsvo munyika, Dr. Dahwa vanoti rimwe dambudziko guru ravakasvika vachisangana naro ndere kuwona vanhu vakawanda vechidiki vachirwara nechirwere cheitsvo.
Pari zvino Dr. Dahwa vari kushanda nevamwe vanachiremba kuti vaite ongororo yehuwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zveitsvo.
Svondo rakapera Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Kidney Day iro rinocherechedzwa paChina chesvondo rechipiri mumwedzi waKurume gore rege rega.
Dr. Dahwa vanoti zuva iri rinobatsira kuti vanhu vawane ruzivo pamusoro pezvirwere zveitsvo.
Pakuti vanofungeyi pamusoro penyaya yekuti pane zvidzidzo nemabasa zvichiri kuonekwa nevamwe vanhu sezvinofanirwa kuitwa nevanakomana kana vanhurume chete, Dr. Dahwa vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanasikana pamwe nemadzimai vanokwanisa kuita zvose zvavanoshuvira muhupenyu kana vakazvipira kudzidza nesimba uye kuisa pfungwa dzavo dzose pazviri.
Zvirwere zveitsvo zviri pazvirwere gumi zvinonyanya kuuraya vanhu pasi rose.
Kunze kwekushaya vanamazvikokota vakakwana muZimbabwe mune dambudziko rekuti kurapwa zvirwere zveitsvo kunyanya kuchishandiswa michina yedialysis kunodhura zvikuru.
Dr. Dahwa vane chipatara chavo vega asi vanowanawo nguva yekushanda pane chimwe chipatara chehurumende muHarare. Vanowanawo nguva yekudzidzisa vanhu pachena nezvezvirwere zveitsvo vachiti vanonzwa kugutsikana kukuru kukwanisa kupa vanhu ruzivo runovabatsira muhupenyu hwavo.
Dr. Dahwa mucherechedzo unoyemurika wevamwe vanhu vechidiki vakazvipira kushandira nyika yavo zvisinei nemamiriro akaita zvehupfumi.